सूचना/प्रविधि Archives - Page 28 of 29 - Recent Nepal News
सामसुङको ग्यालेक्सी फोल्डर टू स्मार्टफोन लञ्च
एजेन्सी। सामसुङले ग्यालेक्सी फोल्डर टू स्मार्टफोन लञ्च गरेको छ । लगातार ३ सय १८ घण्टासम्म ब्याट्री टिक्ने स्मार्टफोन एक कार्यक्रमकोबीच लञ्च गरेको हो । यसमा एलइडी फ्लासयुक्त ८ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामरा र ५ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा रहेको छ । फोनको ब्याट्री १९५० मिलि एम्पिएर आवर क्षमताको छ । नाम अनुसारकै ढाँचामा रहेको यो फोन फोल्ड गर्न मिल्ने दुइपाते फोन हो जुन एन्ड्रोइड ६ मार्समेलो अपरेटिंग सि...
कुन-कुन देशमा कहिले रिलिज हुँदैछ त आइफोन सेभेन ? (रिलिज तालिका)
काठमाडौं । एप्पलले आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली स्मार्टफोन आईफोन ७ र आईफोन ७ प्लस लञ्च पनि सबै देशमा भने लञ्च भएको छैन् । बुधबार अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक भव्य समारोहकाबीच सार्वजनिक गरेपछि अन्यदेशमा लञ्च गर्ने तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ । छिटोमा १९ सेप्टेम्बरमा यो रिलिज हुनेछ। छिमेकी देश भारतसम्म आइपुग्न भने अक्टोबर कुर्नुपर्नेछ। Country Release Date USA 19 September Belgium3October UK 13 ...
आइफोन सेभेन र सेभेन प्लस सार्वजनिक,यस्ता छन् विशेषता
एजेन्सी । एप्पलले आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली स्मार्टफोन आईफोन ७ र आईफोन ७ प्लस लञ्च गरेको छ। बुधबार अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एक भव्य समारोहकाबीच सार्वजनिक भएको हो । एप्पलले यस पटक विशेष डिजाइन तयार पारेको छ। फिनिसिङको लागि यसले नयाँ ब्ल्याक र जेट ब्ल्याक उपयोगमा ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार नयाँ डिजाइन पहिलो पटक धुलो र पानीले असर नपार्ने खालको छ। त्यसैगरी नयाँ आइफोनमा नयाँ किसिमको होम बटन राखिएको छ।...
स्मार्टफोन एप भाइबरले नेपाली उपभोक्तालाई दुई साताका लागि राति दुई घण्टाभित्र १० मिनेटका लागि नि:शुल्क ‘भाइबर आउट कल’सुविधा दिएको छ । भाइबरको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार यो सुविधा नेपाली नम्बरबाट डायल गर्ने ग्राहकले मात्रपाउने छन् । मंगलबार (हिजो)देखि सुरु भएको सेवा नेपाली उपभोक्ताले आगामी असोज ३ गतेसम्म पाउनेछन् । यो सुविधा विभिन्न ५२ वटा फरककोडका मोबाइल एवं ल्यान्डलाइन फोनमा पाइने ...
अहिले सम्मकै यस्तो नयाँ फिचर हुनेछ, आइफोन ७ मा!
स्मार्टफोन बजारको मुख्य हिस्सेदार आइफोनको नयाँ संस्करण ‘आइफोन ७’ यसै साता सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । आइफोन ७ का नयाँ फिचर्स, रंग, आकार, तौल जस्ता कुरामा अनेक अडकलबाजी भइरहेका छन् तर एप्पलले भने आधिकारिक रूपमा कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन् । धेरैको अनुमान के छ भने आइफोनको यो संस्करणदेखि ३.५ मिमिको हेडफोन ज्याक हट्ने छ । यसको बिकल्पको रूपमा वायरलेस हेड सेट अघि सार्ने छ । हेडफोन ज्याकको अर्को विकल...
यूटीएल अब जीएसएम प्रतिस्पर्धामा
मंगलबार, भाद्र २१, २०७३
काठमाडौं,भदौ २१ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले जीएमएस मोबाइल सहितको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको छ । डेढ दशकअघि लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको भारतीय लगानीको कम्पनी यूटीएल जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाउने चौथो कम्पनी भएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । यसअघि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले यो सेवा सञ्चालनका लागि असुरक्षित पाइसकेका छन् । आधारभूत टेलिफोन...
यूरोपिएन यूनियन (इयू) ले अमेरिकी प्रसिद्ध कम्पपनी एप्पललाई १३ अर्ब यूरो (करिब १४.५ अर्ब अमेरिकी डलर) आइरल्याण्ड सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ । इयूले आएरल्याण्डद्वारा अमेरिकी कम्पनी एप्पललाई बुझाएको राजस्व इयू सदस्य सहयोग नियम विपरीत भएको जनाउँदै सो रकम फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेको हो । यूरोपेली आयोगले आएरल्याण्डद्वारा एप्पल कम्पनीलाई बुझाएको करको फाइदा आवश्यक भन्दा बढी भएको र अमेरिकी प...
अष्ट्रेलियामा गुड्यो चालकबिहिन बस
अष्ट्रेलियाको पर्थ शहरमा बुधबार चालकबिहिन बसको सडकमा गुडेको छ। अष्ट्रलियाले पहिलोपटक चालकबिहिन बस परीक्षणका रुपमा गुडाएको हो। ११ जना यात्रु बोकेको सो बस २५ किलोमिटरको रुटमा गुडेको हो। बस प्रतिघण्टा २५ किलोमिटरको गतिमा गुड्ने बताइएको छ। एजेन्सी
नेपाली विद्यार्थीले बनाए पानीमाथी कुद्ने साइकल
मंगलबार, भाद्र १४, २०७३
पथरी (मोरङ), १४ भदौ । मोरङको हाथिमुडामा रहेको मनमोहन पोलीटेक्नीकल कलेजका विद्यार्थीले पानीमाथि कुद्ने साइकल बनाएका छन् । बाढी आइरहेका बेला उद्धार गर्ने उद्देश्यले मनमोहन टेक्निकल कलेजका मेकानिकल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले पानीमाथि कुद्ने साइकल बनाएका हुन् । एक विद्यार्थी बर्जित थापाको समूहले सो साइकल बनाएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीको बेला उद्धार गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले साइकल प्रयोग...
कहिलेकाहीँ मोबाइल फोनलाई साइलेन्ट मोडमा राखेर कतै छाडिन्छ र जति खोज्दा पनि फेला पर्दैन । फोन गर्दा समेत घण्टी नबज्ने भएकाले फोन पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । यदि तपाइँ पनि आफ्नो स्मार्टफोन साइलेन्ट रहेको बेला कतै राखेर बिर्सिने र धुइँपत्ताल खोजेर दुख पाउने समस्याबाट गुजि्रनुभएको छ भने केही एपहरु तपाइँका लागि सहयोगी बन्नेछन् जसले कतै छाडिएका फोन पत्ता लगाउन सहयोग गर्नेछन् । क्लाप टू फाइन्ड एपः यो एप...